Fahamendrehana teny - Pejy fandokoana maimaim-poana
“Asehoy ny diso ny olona hendry dia hisaotra anao izy, asehoy ny fahadalana ataon'ny olona adala dia hanafintohina anao izy. Laotse “Tena marina. Ity teny nindramina ity no antony niarahanay nanonona ny teny faran'izay tsara indrindra momba ny hadalana eto amin'ity pejy ity.
Teny nalaina momba ny hadalana
Ny teny nalaina sasany dia toa manambany, fa ny politika iraisam-pirenena dia mampianatra antsika foana fa misy be dia be ny fahamarinana ao ambadiky ny teny nalaina. Mizaha amin'ny alàlan'ny fanangonana ireo teny nalaina, teny ary fahendrena tsara indrindra momba ny hadalana:
Hadalana amin'ny teny - © Alliance / Adobe Stock
Ny tsy fisian'ny hery ara-panahy dia miteraka tsy fisian'ny olombelona. Joseph Roth
Ny maditra tsy miteny dia mbola zaka kokoa noho ny adala tsy mahay mangina. Jean de La Bruyère
Ny fomba tsara indrindra handresena lahatra ny adala dia ny famelana azy ireo hanao ny hadalany. Josh Billings
Ny hadalan'ny sasany dia loharanon'ny fahendrena tsy mety ritra ho an'ny sasany. Alois Essigmann
Ny hadalana dia rahavavin'ny lolompo. Sophocy
Ny hendry dia mampiasa ny hendry, toy ny olona kely manao kiraro avo. Luc de Clapiers
Ny ondry adala indrindra dia amboadia mamirifiry indrindra. Friedrich Hebbel
Tsy misy dikany ny taona. Raha adala ianao ary tsy nianatra na inona na inona, dia mbola mitory amin'ny fitopolo taona toy ny tamin'ny fito ambin'ny folo taona ihany. Theodor Fontane
Miaraka manary ny hadalany rehetra ny olona, ​​manangana masiaka ary miantso azy io hoe lahatra. Thomas Hobbes
Ny hadalan'ny olombelona dia tsy afaka mametraka ny tanany. Romain Rolland
Tia miady mafy ny nightingale, ka mierona ny omby na ampondra. Misaotra anao
Tsy adala izy manao zavatra adaladala; fa iza no tsy mahay manafina azy ireo avy eo. Baltasar Gracián y Morales
Samy manana eritreritra adaladala daholo ny olona, ​​fa ny hendry kosa mampangina azy. Wilhelm Busch
Tsy fantatry ny adala na dia ny eritreriny faran'izay hendry aza. Michel de Montaigne
Areti-mifindra ny hadalana, zara raha maniry hanjary areti-mandringana ny saina. Kazimierz Bartoszewicz
Ny hadalana koa dia endrika iray tsy manam-paharoa. Moritz Heimann
Ny hadalana no hita voalohany; miverina ny saina mahita. Carmen Sylva
Ny adala dia fahavalon'ny fianianan'ny vehivavy. Henri Stendhal
Ny tena hadalana dia aretina tsy sitrana. Otto von Leixner
Mihevitra ny adala fa tsy misy fomba hafa hanoratana azy raha tsy ny azy. Jean Paul
Ny adala mahita foana olona dondrona fotsiny, izay mankafy azy. Nicolas Boileau-Despréaux
Ny olona mahay manafina ny hadalany dia tsara noho ny te-hampideradera fahendrena. Leo Tolstoy
Ny tsy mianatra dia mino izay mety aminy. Ludovico Ariosto
Ny mitelina tsy mahavita fahavaratra, fa ny rameva kosa manao efitra! Alfred Capus
Ny hakamoan'ny ratsy sy ny fahanginan'ny adala no irina. Nicolas Chamfort
Misy adala miakanjo tsara satria misy adala miakanjo tena. Nicolas Chamfort
Tsy misy ota fa hadalana. Oscar Wilde
Misy ny olona manana ny fahamendrehany rehetra milaza sy manao zavatra tsy misy dikany. François de La Rochefoucauld
Tsy misy fahamalinana manoloana ny hadalana izay mandeha amin'izao fotoana izao. Theodor Fontane
Andriamanitra dia nametra fetra ho an'ny fahalalan'ny olombelona, ​​fa tsy ho an'ny hadalana. Elbert Hubbard
Namorona ampondra Andriamanitra mba hahafahany mampitaha olona. Heinrich Heine
Ny iditra dia fitaovana hendry voajanahary mamela ny adala hihevitra ny tenany ho hendry. Oscar Wilde
Arakaraka ny hamerimberenana zavatra adalana matetika no vao mainka miseho ho mahay. Voltaire
Arakaraka ny maha-olona tsy nahita fianarana no mahavita haingana ny fialantsiny. Marie von Ebner-Eschenbach
Myopia dia tsy fahampiana ankehitriny, fa tsy ara-batana fotsiny. Julius Langbehn
Ny olona tsy mahalala firy dia matetika mpandahateny. Jean-Jacques Rousseau
Ny olona iray dia tsy maintsy manapotika ny talisman'ny hadalana amin'ny tanana mahery. Claude-Adrien Helvetius
Tsy misy olona afaka miteny hadalana. Ny loza dia ny mitondra azy ireo amin'ny fomba manetriketrika. Michel de Montaigne
Tsy misy olona tonga hendry raha tsy mianatra ny sarotra. Mpianatra ho amin'ny fiainana ve? Alexander Moszkowski
Izay tena hendry sy adala indrindra ihany no tsy miova. Confucius
Ny hadalana saro-kenatra sy ny fahantrana mahamenatra dia masina ho an'ireo andriamanitra. Marie von Ebner-Eschenbach
Aza malahelo! Avelao ny zavatra hanaraka azy. Amin'ny farany dia ho resy foana ny adala sy ny ratsy. Laotse
Raha miseho ny genius dia fraternize ny adala. Jonathan Swift
Miaro amin'ny devoly, ny club amin'ny bera, ary ny tsisy saina - tsy misy na inona na inona. Ohabolana rosiana
Ny zavatra tsy mendrika holazaina amin'izao andro izao dia hiraina. Pierre Augustin Caron de Beaumarchais
Raha miantsoantso anao ny boriky, dia tsy misy antony tokony hiantsoantsoana any aoriana. George Herbert
Raha mandratra ny hadalana, dia tomany izaitsizy any amin'ny trano rehetra eran'izao tontolo izao! Friedrich von Logau
Ny fahazoana ny hevitry ny tsy manam-petra dia mitaky ny fijerena ny halehiben'ny hadalan'ny olombelona. Voltaire
Izay tia ny tenany amin'ny hadalany dia tsy hiditra amin'ny fahendrena. Augustine Aurelius
Asehoy ny diso ny olona hendry dia hisaotra anao izy, asehoy ny fahadalana ataon'ny olona adala dia hanafintohina anao izy. Laotse
Faly izahay manampy fanampiny, teny sy fahendrena momba ny hatsaran-tarehy amin'ny fanangonana anay. Aza misalasala mifandray aminay!